Garoonka Diyaaradaha Buuhoodle Oo Laga Mamnuucay Cali Khaliif Galeyr – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Xuseen Axmed 6 February 2017
Ciidamadii Shalay Cali Khaliif Galeyr u diiday in uu ka duulo garoonka diyaaradaha Magaalada Buuhoodle ee gobolka Togdheer ayaa waxaa ay sheegeen in ay Amaro cusub in ay kusoo rogeen garoonka diyaaraha Magaalada Buuhoodle.
Waxaa ay sheegeen in Garoonka aysan kasoo degi karin diyaaradaha sida dadka taageersan Somaliland ama doonaya in ay qaadan Siyaasiinta Khaatumo ee doonaya in ay u safraan Magaalada Hargeysa.
Taliyaha Hogaaminaya Ciidanka shalay Cali Khaliif Galeyr u diiday in uu ka dhoofo garoonka diyaaraha Buuhoodle ayaa Warbaahinta u sheegay in Cali uusan mardambe kasoo degi doonin Garoonka Buuhoodle.
Wadahadalada maamulada Somaliland iyo Khaatumo ayaa maraya meel Gabogabo ah , waxaana Khaatumo ay doonaysaa in ay ku biirto maamulka Somaliland.
Ciidamo Beeleed ku sugan Buuhoodle ayaa u sheegay Cali Khaliif Galeyr in uusan ka qeyb gali karin Wadahadalada Somaliland iyo Khaatumo.Cabdifataax Baydan oo ah taliyaha ciidan beeleedkii Buuhoodle ku xanibay Galayr shalay ayaa sheegay in aysan ku qanacsanayn wadahadalada uu kula jiro Somaliland.